အငယ်တန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ (Entry Level) - အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » ဂျော့ဘ် » အငယ်တန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ (Entry Level)
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: အငယ်တန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ (Entry Level)
ရာထူး: အငယ်တန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ (Entry Level)
ကုမ္ပဏီ: TRF စနစ်များ, Inc (Paradym)
Location: နို့ TN US
Paradym (TRF စနစ်များ, Inc) အိမ်ခြံမြေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမိမိတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားကူညီပေးနေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောဦးဆောင်အိမ်ခြံမြေစျေးကွက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလိုအလျောက်ကိရိယာများ, ကို virtual tour မှာဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်မိုဘိုင်းခဲမျိုးဆက်-Paradym ရလဒ်များကိုအကြောင်းပါ။ စျေးကွက်ကနေ ကျနော်တို့ကသူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းရောက်ရှိနေတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သူတို့ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံကူညီရန်အေးဂျင့်များနှင့်ပွဲစားများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။
အိမ်ခြံမြေစက်မှုလုပ်ငန်းတက်လှုပ်မယ့်သူတစ်ဦးကြီးထွားလာနည်းပညာကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်နေကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား? ကျနော်တို့နို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဆင်ရေးတိုးချဲ့နှင့်ကြီးထွားလာကြသည်! ကျနော်တို့လက်ရှိပြောင်းလဲနေသောနှင့်လုံ့လရှိသူအငယ်တန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ (Entry Level) ရှာကြသည်။ ဤသည်အခန်းကဏ္ဍကိုအခြေခံ Photoshop ကိုတည်းဖြတ်ရေးကပါဝငျနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်စျေးကွက်အသင်းကိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့ပုံရိပ်တွေတိုးမြှင့်။ ကျနော်တို့ကနည်းနည်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးသူတစ်ဦးအဖွဲ့သည်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကိုရှာဖွေနေနေကြတယ်, ကြီးထွားဖို့ရာအတွက်အနေအထားရှာနေနှင့်လိုအပ်အဖြစ်သင်ယူနှင့်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေအပေါ်ယူလိုလားနေသည်။
အသေးစိတ် oriented, ဖန်တီးမှုနှင့်အပြုသဘော
ဖန်တီးမှုဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူကြီးထွားဖို့စိတ်အားထက်သန် dynamic တစ်ဦးချင်းစီ
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ဖန်တီးမှု setting ကိုအတွက် Photoshop ကိုသုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်
Adobe ကယ့်ကို Creative Cloud ကို Suite (အာရုံစိုက်): Photoshop ကို; Illustrator, နှင့် Acrobat
ဒါကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Entry-level အနေအထား ။ ကျနော်တို့နှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုရှာဖွေနေကြသည် အတွေ့အကြုံထက်နည်းနှစ်နှစ် Photoshop နဲ့ Illustrator အတူ။
အဆိုပါနို့, Tennessee ပြည်နယ်ဧရိယာပြင်ပလျှောက်ထားထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကစာချုပ်အခွင့်အလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမှန်တကယ်အသည်းအသန်ပါပဲ, ကြှနျုပျတို့သူတို့ဘဝအတွက်ခြားနားချက်စေသူတို့ရဲ့ရှုပ်ထွေးလိုအပ်ချက်များအတွက်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများဒီဇိုင်းအပေါ်အာရုံစိုက်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအထား, ငါတို့ကလူသုံးစွဲဖို့ကိုချစ်ကြောင်းတျသှငျးခံဖြေရှင်းနည်းများကိုဖန်တီးရန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။
Ira ကိုက်ညီရက်ရက်ရောရောပေးချေအချိန်ကိုချွတ်နှင့်အတူအကျိုးကျေးဇူးများကိုအထုပ်, ပါးစပ်တွင်း / ဆေးပညာဆိုင်ရာ / ရူပါရုံကိုအာမခံနှင့်ကုမ္ပဏီ
စိန်ခေါ်မှု, လှုံ့ဆျောမှု, ပျော်စရာအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်
လစာ: $ 13.00 / နာရီ
Entry-level ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း: 1 တစ်နှစ်
နောက်တစ်ခု: audio ဗီဒီယိုအရောင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ်